प्रदेश नं. १ मा एकै दिन ४० जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्के « Koshi Nepal
प्रदेश नं. १ मा एकै दिन ४० जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्के
प्रकाशित मिति : 18 June, 2020 2:04 pm
विराटनगर, ४ असार । प्रदेश १ मा आज बिहीबार ४० जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्केका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय आइसोलेसन उपचार केन्द्र, सुन्दरहरैचामा उपचाररत ४० जना डिस्चार्ज भएर घर फर्केका हुन ।
डिस्चार्ज हुनेमा सुनसरीका १६, झापाका ११, मोरङका ९ र भोजपुरका ४ जना १५ देखि ४७ वर्ष उमेरका पुरुष रहेका छन् । सुन्दरहरैचाबाट डिस्चार्ज हुनेहरूलाई आज प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, प्रदेश सांसद लोकप्रसाद संग्रौला, राजकुमार ओझा, सुन्दरहरैचाका प्रमुख शिव ढकाल, उपप्रमुख धना तामाङ लगायतले बिदाइ गर्नुभयो ।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकाहरूलाई बिदाइ गर्दै मन्त्री घिमिरेले प्रदेश १ मा कोरोना नियन्त्रण हुँदै गएको बताउनुभयो । प्रदेशवासीले चाँडै सुखद खबर सुन्न पाउने मन्त्री घिमिरेले बताउनुभयो । कोरोना संक्रमण अन्त्यको आधार तय हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो । क्वारेन्टाईनमा मात्र संक्रमण देखिएकाले चाँडै कोरोना नियन्त्रणमा आउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । क्वारेन्टाईनमा मात्र संक्रमण देखिएकाले क्वारेन्टाईनलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने मन्त्री घिमिरेको भनाई छ । मापदण्ड विपरीतका क्वारेनटाइन बन्द गरिँदै लैजाने उहाँले बताउनुभयो ।
आज डिस्चार्ज हुनेहरू गत जेठ २२ गतेदेखि २६ गते सम्म भर्ना भएकाहरू रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र संकायका डीन डा.शैलेशमणी पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश १ मा आज ४० जना डिस्चार्ज भएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या २ सय २४ पुगेको छ । संक्रमितको संख्या ४ सय १६ रहेको छ ।
संक्रमित मध्ये २९ जना कोसी कोभिड अस्पताल विराटनगर, ८५ जना पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाँउ र ७८ जना वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचाररत रहेका छन् ।
कटुवा पेस्तोल र लागूऔषधसहित दुई युवा पक्राउ
प्रदेश १ मा ५५६ जना संक्रमित थपिए : ६९५ जना डिस्चार्ज
डा. भट्टराईले भने खगेन्द्र संग्रौलाजस्ता व्यक्ति समेत कागको पछि दौडने देशमा के अपेक्षा गर्नु ?
नेपालमा हालसम्म एक लाख १८ हजार आठ सय ४३ जना कोरोनामुक्त
कोरोना भाइरसबाट दुई जनाको मृत्यु
वसन्त बान्तावा राईद्धारा भाउन्ने युथ क्लबलाई फुटबल जर्सी प्रदान
ओखलढुङ्गामा आफ्नै छोरीलाई गोली हान्ने बाबु कारागार चलान
एन.टी.रेन्ट एण्ड रिकण्डीसन हाउसले भाउन्नेबाट सेवा दिने
गृह मन्त्रालयद्धारा दर्ता अपरेटरका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौ,१३ कात्तिक । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सय जना दर्ता अपरेटरका
प्रदेश–२ मा भोलि सार्वजनिक विदा
धनुषा, १३ कार्तिक । इस्लाम धर्मका प्रवर्तक पैगम्बर हजरत मोहम्मदको जन्मदिनका अवसरमा प्रदेश–२ सरकारले कात्तिक